Ford Expedition - SUV enamandla, yethulwa emuva ngo-1997 futhi kusukela ngaleso sikhathi lukhuthazelela ukulungiswa ezimbili: ngonyaka ka-2003 no-2007 Ingabe ufuna ukwazi ukuthi kungani eneminyaka engu nanhlanu ubudala uyathandwa?
Uma sibheke Ford Expedition, uyaqaphela ngokushesha ukuthi Ubukhulu yayo enhle - amamitha angaphezu kwayisihlanu eside futhi amamitha amabili ububanzi.
Ngaphakathi, kukhona ayibe nezinhla ezintathu izihlalo, okuyinto ejwayelekile salokhu ikilasi lomshini. Kulokhu, imigqa lesibili nelesithathu kungenziwa eligoqiwe, ngenkathi ivolumu kwelinye lamagumbi umthwalo kwandisa amalitha ayizinkulungwane ezintathu - i irekhodi ngokuphelele phakathi kwezinye SUV.
Izinto ngoba Upholstery kungaba Indwangu noma isikhumba.
Ngaphansi hood kuyinto Ford Expedition V8 uphethiloli injini, okuyinto ikhiqizwa izinguqulo ezimbili - 218 amahhashi ephethe umthamo we 4.6 amalitha noma 233 amahhashi ephethe umthamo we 5.4 amalitha. Lokhu motor kungenzeka ezingemuva wheel drive noma wonke-wheel drive. Ngakho samuntu sokuqala phambi esikhundleni ezivamile ikhoyili torsion iziphethu abekwa. Nokho, njengoba umkhuba imibukiso, ikhwalithi ride is hhayi kubonakala ngempela.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Ford Expedition has amabhuleki umxhwele kunazo zonke izimoto ekilasini yayo: phambi usayizi - nantathu amayintshi, futhi bakhulise - nanye. I pads ukubopha zifakwa nge double-piston calipers, ukuze ibanga unyathela amabhuleki is kakhulu ziyancipha, ngisho noma kakhulu ibenze isinyathelo.
Ngesikhathi 2002 Detroit auto show yethulwa version modified of Ford Expedition. Ubukhulu balo babé baningi ngisho nangaphezu ngokuthi umqulu kwelinye lamagumbi imithwalo aye athuthukiswa. Imodeli entsha kwaba ifakwe ezingemuva ukumiswa kanye yokubeka mathupha. Umugqa wesithathu izihlalo walishintsha kancane - manje uwafake sekulula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, imoto ifakwe injini enamandla angaphezulu gearbox emine esiteji.
Of ukuthuthukiswa electronics kungaba kuqashelwe ukuthi abathuthukisi ukukhokha kakhudlwana ukuphepha kwabagibeli. Ngokwesibonelo, i-airbag singase sibe yimizuzwana engu eziyisithupha bahlale besesimweni eqolo, ukunciphisa umonakalo by okuphindaphindiwe Icebo lika umshini.
Kwathi ngo-2007. Manje uhlelo imoto obzavolsya cruise control, air conditioning, ikhompyutha uhambo lokuzula. Zonke izinhlelo abangu ezilungisiwe ngekhompyutha, ngisho isikhundla ihamba kungase kushintshwe njengoba umshayeli efuna ke.
Kukhona yokudlulisela izindlela ezine, kanye drive ezingemuva-wheel, usuke othomathikhi kwi- drive edonsa ngawo wonke amasondo, futhi iinthombe downshift.
Ngaphezu kwalokho, imodeli iye ifakwe ashukumisayo ukubopha control, okwadala unyathela amabhuleki esiphezulu ezingongolweni, lapho-ke kwakudingekile. imishini Standard kuhlanganisa namasondo angu nesikhombisa intshi ifakwe ingcindezi izinzwa control.
Ukuguqulwa yesibili namanje zokugcina, ngakho Ford Expedition 2012 ukukhululwa ubukeka ngaleyo ndlela.
Lokhu imodeli SUV sasivumela enamandla, ogama Ubukhulu ungakwazi kuphela zibabaza. Ngaphakathi, induduzo kanye isikhala esiningi. Futhi electronics entsha futhi isistimu zokuphepha ezithuthukisiwe inikeze ithuba lokujabulela ngokuphepha ride.
Zezimoto zomjaho e Izhevsk
Mirrors nge DVR okuhlangene
Izici Technical imoto yezemidlalo Lamborghini Aventador LP700-4
Ukudla Buckwheat isisindo ukulahleka: kadokotela izinsuku ezingu-14
UQobo isilinganiso Mascara for eyelashes
Dybenko uPawulu Efimovich: Biography nesithombe
Inkomba atherogenic: kuyinsakavukela kanye nokusuka
"Primavera" - yokudlela Italian eMoscow
Pearl ibhali imifino: iresiphi, izimfihlo ukupheka. Delicious ibhali iphalishi
Indlela yokwenza izimonyo kwesokudla
Blender "Scarlet": ukubuyekezwa kanye izici